प्रदेश-५ – Page 33 – Halkaro
रूद्रपुर गाविसमा महिलाहरूको पाठेघर तथा स्थन क्यान्सरको निःशूल्क परीक्षण
रूपन्देही । जिल्लाको ग्रामिण भेग रूद्रपुरमा महिलाहरूकालागि शुक्रवार स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न भएको छ । ग्रामीण भेगका महिलाहरुले लामो समयदेखी उपचारको अभाबमा भोग्दै आएका स्वास्थ्य समस्यालाई निर्मुल पारी स्वास्थय समाज निर्माणमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले महिलाहरुको पाठेघर र स्तन क्यान्सरको प्रारम्भिक परिक्षण तथा रोकथाम कार्यक्रम संम्पन्न भएको हो। लायन्स क्लब अफ बुटवल तिलोत्तमा, लायन्स क्लब अफ बुटवल […]
नवलपरासी । जिल्लाको को दुम्किबासमा आज भएको दुर्घटनामा दुईजनाको मृत्यु भएको छ । पूर्वबाट पश्चिम आउँदै गरेको लु १ ज २६७५ नम्बरको भ्यान र विपरीत दिशाबाट जाँदै गरेको लु २० प ६३६७ नम्बरको मोटरसाइकल एकआपसमा ठक्कर खाँदा दुर्घटना भएको थियो । दुर्घटनामा परी मोटरसाइकल चालक र मोटरसाइकलको पछाडि बस्ने दुवैजनाको घटनास्थलमै मत्यु भएको प्रहरीले जनाएको […]
रूपन्देही । लायन्स क्लब अफ बुटवल तिलोत्तमा, लायन्स क्लब अफ तिलोत्तमा मायादेबी र लियो क्लब अफ तिलोत्तमा को सयुक्त रक्तदान कार्यक्रम सोमबार सम्पन्न भएको छ । क्लबको नियमित बार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत रक्त सञ्चार केन्द्र बुटवलमा सो कार्यक्रम गरिएको हो । रक्तसञ्चार केन्द्र बुटवलको प्राविधिक सहयोगमा गरिएको रक्तदान कार्यक्रममा २२ यूनिट रगत संकलन भएको छ । […]
तेरियाले जितिन झलक दिखला जाको ट्रफि
प्रकाशित मिति : २०७३, ८ माघ शनिबार January 21, 2017
काठमाडौँ । रूपन्देही रूद्रपुरकी चेली तेरिया मगरले भारतको चर्चित टेलिभिजन ‘झलक दिखला जा’को ट्रफि जितेकी छिन् । बलिउड अनलाइन ‘बलिउड लाइफ’का अनुसार उनले अन्य २ प्रतिस्पर्धीलाई उछिन्दै उनले यो शो जितेकी हुन् । यसअघि डिअाइडी लिटिल मास्टर्सको उपाधि जितेकी तेरियाले डान्स स्टारहरूबीचको प्रतिस्पर्ध झलक दिखलाजाको उपाधि जितेकी हुन् । उनलार्इ सलमान यूसूफ खानले टक्कर दिएका […]
पोखराबाट अर्घाखाँचीसम्म सुरूङमार्ग !
प्रकाशित मिति : २०७३, २८ पुस बिहीबार January 13, 2017
अर्घाखाँची । उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले प्रदेश विभाजनसहितको संशोधन विधेयकको विरोधको गढ अर्घाखाँचीमा पुगेर त्यहाँ जनतालार्इ अाश्वासन बाँढेका छन् । उनले अर्घाखाँचीका जनतलार्इ सदरमुकाम पोखरा पूगन टाढा र असहज भए सुरूङमार्ग बनाइदिने अाश्वासन दिए । प्रदेश विभाजनको निर्णय रोल्पा र रुकुमका जनताको माग अनुसार भएको भन्दै उनले स्थानीयको माग अनुरूप पाँच नं. प्रदेशबाट पहाड अलग गरिएको […]
विपक्षी मोर्चासँग २०१ सांसद छन् अनी कसरी पास हुन्छ संशोधन विधेयक ?
रूपन्देही । नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलले संविधान संशोधन प्रस्ताव असफल पार्ने बताएका छन् । सरकारले चोर बाटोबाट संशोधन प्रस्ताव संसदमा टेबल गरे पनि असंवैधानिक र राष्ट्रहित विरूद्धको प्रस्ताव कुनै हालतमा पास हुन नदिने स्पष्ट पारे । प्रेस चौतारी नेपाल, रूपन्देहीले बिहीबार बिहान बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै नेता पोखरेलले कांग्रेस […]
भारतीय अबरोधका कारण सुस्तामा पुल निर्माण अवरूद्ध
प्रकाशित मिति : २०७३, २५ पुस सोमबार
काठमाडौँ । नवलपरासीको त्रिवेणी–सुस्तास्थित नारायणी नदीमा झोलुंगेपुल निर्माणमा भारतीय पक्षले व्यवधान गरेको छ । त्रिवेणी–सुस्ता गाविस–४ का नागरिकको सुविधालाई ध्यानमा राखी सरकारले झोलुंगे पुल निर्माण कार्य अघि बढाएसँगै भारतीय पक्षले अवरोध गरेको हो । भारतीय अवरोधबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालय नवलपरासीले गृह मन्त्रालयमार्फत परराष्ट्रलाई जानकारी गराइसकेको छ । निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने ढुंगा, गिटी, वालुवा, […]
गैँडाको मृत्यु प्रकरणः करेण्ट लागेर की विषादीले ?
प्रकाशित मिति : २०७३, १८ पुस सोमबार
नवलपरासी । जिल्लाको गैँडाकोटमा मृत फेला परेको गैँडाको मृत्यु करेण्ट लागेर भएको जिल्ला वन कार्यालयले पुस १८ नवलपरासीको गैडाकोटमा सोमवार एक वस्यक गैडाको रहस्मय तरिकाले मृत्यु भएको छ । गैडाकोट नगरपालीकाको वडा नं. ७ गैरीका उमाकान्त सापकोटाको मकै बारीमा सोमवार मृत अवस्थामा उक्त गैडा भेटिएका थिए । स्थानीयले विहान गैडा देखेर हो हल्ला गर्दा समेत […]
मकैबारीमा गैँडा मृत अवस्थामा फेला
प्रकाशित मिति : २०७३, १८ पुस सोमबार January 2, 2017
चितवन । नवलपरासीको गैँडाकोटमा एक गैँडा मृत अवस्थामा फेला परेको छ । गैँडाकोट ७ गैरीमा मकैबारीमा पोथी गैँडा मृत अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ । मृत्युको कारण खुल्न सकेको छैन् । निकुञ्जबाट प्राविधिक टोली गैँडाकोट जाँदै छ ।
लियो सिद्धबाबाद्धारा युवालाई लेखा तालिम प्रदान
प्रकाशित मिति : २०७३, १७ पुस आईतवार January 1, 2017
बुटवल । लायन्स कल्व स्थापनाको एक सय वर्ष पुगेको अवसरमा लियो कल्व अफ सिद्धबाबाको अयोजनामा ३५ दिने कम्प्युटर तथा लेखा तालिमको आज एक कार्यक्रमका विच बुटवलमा उद्घाटन गरीयो । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एक्सटेन्सन चियरप्रसन लायन रामप्रसाद बन्जाडेले कल्वले गरेको काम युवालाई उद्यामशिल बनाउन लक्षित रहेकोमा जोड दिदैं आगामि दिनमा पनि क्लबले अन्य कार्यक्रहरु गर्दा पनि […]